Semalt dia manolotra soso-kevitry ny tranonkala
Ny dikanteny ary hanamaivana ny fizotry ny fikikisana. Izy ireo dia natao tamin'ny Python, Java, Ruby, C ++ ary ny tenim-paritra hafa ary koa antsoina hoe mpanangom-bokatra na mpanangona tranonkala. Eto izahay dia nizara lisitra iray ahitana ny rindrambaiko tsara indrindra rindrambaiko tsara indrindra amin'ny aterineto.
Ny scrapebox dia tsy vitan'ny mpikirakira ny tranonkala ihany fa ny SEO manontolo. Mety tsara ho an'ny orinasan-draharahan'ny SEO, ny mpikirakira aterineto, ary ny webmasters; Ny sasany amin'ireo endriny tsy manam-paharoa dia ny fitadiavana ny motera mikararana, ny teny fanalahidy hijinja, ny fijinjana proxy, ny fanehoan-kevitra ary ny fanamarihana rohy. Plus, ity fitaovana ity dia manamarina ny laharan'ny pejy, mamorona rindrambaiko RSS, mametraka adiresy mailaka, mahita faritra tsy fantatra, ary manatanteraka asa am-polony. Ny Scrapebox dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana manokana sy matihanina.
Ity rindrambaiko tranonkala ity dia efa naharitra ela. Import. Izany dia mamela ny pejin-tranonkala ho amin'ny API mifanaraka amin'ny tsindry vitsivitsy. Mora aminao ny misintona vaovao avy amin'ny tranonkala. Manana endri-javatra maro izy io ary afaka miara-miasa amin'ny tranokala tsotra sy tsotra.
iMacros dia iray amin'ireo mpanondrana vaovao tsara indrindra amin'ny aterineto. Izany dia ahafahanao manangona sy ny angon-drakitra araka ny zavatra takinao. Ity fitaovana ity dia mandinika sy mamaky ny lahatsoratra, sary ary horonan-tsary. Miaraka amin'i iMacros, afaka manondrana na manondrana ny vaovao amin'ny XML sy CSV ny rakitra. Mety tsara ho an'ny mpandraharaha sy orinasa ary manao asa maro amin'ny fotoana iray ihany.
Scrapy dia iray amin'ireo tolotra malaza amin'ny tranokala malaza indrindra. Izy io dia mpikirakira tranonkala avo lenta, izay ampiasaina hananganana sy hikarakarana ny tranokala sy bilaogy samihafa. Ny sasany amin'ireo sehatra malaza indrindra dia ny fanodinana ny angona, ny fitrandrahana ny informatika, ary ny arisiva ara-tantara. Manampy anao hahazo tombony amin'ny API voafaritra tsara izy ary mahatonga ny asanao ho mora kokoa.
Mozenta dia mety amin'ny orinasa madinika, midina ary lehibe. Izy io dia varo-boba mahery vaika ary manangona votoaty avy amin'ny tranonkala samihafa. Miaraka amin'i Mozenda, afaka manangona sy mandamina ny vaovao amin'ny fomba mahomby ianao. Ny haavon-tsakafon'ilay rahona dia miantoka haingana ny famolavolana, ary ny fanamora-pahefana amin'ny lafiny iray. Tsy mitaky fikojakoana ary afaka manao asa maromaro ao anatin'ny ora iray.
PromptCloud dia fantatra amin'ny fombafomba ampiasain'ny tranonkalan'ny tranonkala. Mamela anao hitsikerana sy hikapoka tahiry maro avy amin'ny loharano maro amin'ny fiteny maherin'ny 130. Ireo tahirin-kevitra dia mety ho voavonjy na maimaim-poana amin'ny fiatoana sarotra ho an'ny fampiasana amin'ny aterineto. Azonao atao ny mikendry ny manamarina tranokala, sehatra fifanakalozan-kevitra, sehatra media sosialy ary famoaham-baovao amin'ny alalan'ity fitaovana ity. Ny PromptCloud dia mihetsika toy ny mpiloka mahery ary manindry matetika ny pejy web-nao ho an'ny lalao mozika tsara kokoa.
ParseHub dia nahazoan-dalana avy amin'ny Debuggex, Inc. Io no iray amin'ireo tolotra maimaim-poana mafonja indrindra sy matanjaka ary malaza. Ity famelomana Chrome ity dia ampiasaina hamadika ireo tranonkala dynamic ho fampahalalana azo vakina sy azo henoina. Ho an'ny mpandrindra sy ny mpandrindra, ity fitaovana ity dia manome fifehezana tanteraka ny rafitry ny angon-drakitra.
WinAutomation is licensed by Softomotive Ltd. Izany dia fitaovana maoderina automation izay ahafahanao manamboatra ny asa miverimberina. Manamboatra angon-drakitra izany, ary mora kokoa ny tranonkala mikaroka ary manome valiny marina. Ity fitaovana ity dia vaovao vaovao ary misy karazany maro: afaka mamonjy ireo angon-drakitra fanampiny ao amin'ny rakitra Excel na Google Drive ianao noho ny fandeferanao. Azonao atao koa ny mandefa ny data amin'ny format XML, RSS ary JSON Source .